အယျဒီတာ့သငျပုနျး -စကျတငျဘာ ၂၀၁၉ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » အယျဒီတာ့သငျပုနျး -စကျတငျဘာ ၂၀၁၉
အယျဒီတာ့သငျပုနျး -စကျတငျဘာ ၂၀၁၉
Posted by kai on Aug 30, 2019 in Contributor, Columnist, Editor's Notes, Myanmar Gazette |0comments
မြန်မာ့ရေးရိုးစွဲလာ လူသား၏ ရန်သူအမျိုးငါးပါးဖြစ်ပါသည်။ ဆိုထုံးမှာရှေးနှစ်မည်မျှကြာသည်ကားမသိ မြန်မာ့ ရေးရိုးအများစုတို့သည် အိန္ဒိယ၏ ဗုဒ္ဓသာသနာကို မှီရကား နှစ်ထောင်ချီနေပြီခန့်မှန်းရ၏။ မိမိက/လူသားက ဘာမှပြန်တုံ့ပြန်မလုပ်နိုင်။ မတားနိုင်။ ပြုသမျှနုရမည် ဘ၀ရောက်စေသည့် လူသားအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးစေသော သက်ရှိ/သက်မဲ့သဘာဝကို ခေါ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရှေးထုံးကိုပယ် ၂၁ရာစုနှင့်ညှိရာဝယ် ငါးပါးကျန်သင့်မကျန်သင့် ကြည့်ပါအံ့။
နွေတွင်ရေရှားခဲ့သည်လည်းဖြစ်၍ အချို့ဒေသများမှာ ရေကြီး/ရေရှား နှစ်စဉ်တလှည့်စီဖြစ်နေခြင်းတည်း။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဆင့်မှ ဦး‌ဆောင်ကော်မတီဖွဲ့ကာ ဖြေရှင်းနေပါသော်လည်း လက်ပူတိုက်ခြင်းသဘောသာဖြစ်နေ၍ အောင်မြင်ခြင်းလည်းမရှိ။
“ကမ္ဘာ့ဥတုရာသီအစွန်းရောက်သွားပြီ”ဖြစ်ရကား နှစ်စဉ်စုနမိလှိုင်းများကဲ့သို့ဆင့်ဆက်လာတော့မည်ဖြစ်သော သဘာဝကပ်ဘေးများကို ရင်ဆိုင်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အဆင့်မဆိုထားလင့် လက်တလောထ,ဖြစ်နေသည်များကိုပင် နိုင်အောင်မထိမ်းနိုင်။
ပညာရှင်ချို့ယွင်း/နည်းပါးနေသလော?။ ကမ္ဘာတွင်ကား ရေကြီး/ရေလျှံ။မိုးခေါင်ရေရှားအတွက် ထိန်းကြောင်းစနစ်ကောင်းများရှိခဲ့ပြီ။ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဘွဲ့လွန် ပါရဂူအဆင့်ထိထားသင်ကြားပေးနေနိုင်ကြပြီ။ ရေနှင့်လူသားဆက်ဆံအသုံးပြုနေကြသည်မှာ နှစ်ထောင်-သောင်းချီခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလား။ ငလျင်ကြောင့် ကမ်းရိုက်လှိုင်းစုနမိလာမည်ဆိုဦး လူအသေအပျောက်နည်းအောင် အချက်ပေးစနစ်တို့ တပ်ဆင်နိုင်ခဲ့ကြပြီ။ ရေဖြင့်လူအသက်သိန်းချီပျက်စီးသည့်အမှုကား မရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။
သစ်ပင်ဟူသည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုစုတ်ယူပြီး အောက်စီဂျင်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ရကား ထိုအမေဇုံမိုးသစ်တောကြီးကို မြေကမ္ဘာ၏ အဆုတ်ကြီးအဖြစ်တင်စားကြသည်။ ကမ္ဘာ့အောက်ဆီဂျင်၏ ၂၀% ကိုထုတ်ပေးနေသည့်တောကြီးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့စက်မှုနိင်ငံကြီးတို့သည် ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတို့ကို လောင်မီးချမီးရှို့ပစ်ပြီး စွမ်းအင်ထုတ်ယူသုံးနေရကား ထွက်လာသောကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်များကိုယူ လူအတွက်လိုအပ်သည့် အောက်စီဂျင်ပြန်ထုတ်ပေးသော မိုးသစ်တောထုမီးလောင်ခြင်းသည် မိအေးနှစ်ခါနာ။
ကမ္ဘာပူနွေးလာသည်နှင့်အမျှ ‌သွေ့ခြောက်ခြင်းကြောင့်ဥရောပ။မြောက်အမေရိက။အာဖရိကနှင့်အာရှ။သြစတေးလျှတိုက်ကြီးတိုင်းတွင် တောမီးအကြီးအကျယ်လောင်ပါသည်။ ရေ၇၀၀၀၀လီတာဝင်ဆန့်သည့် 747 Supertankerလေယာဉ်ကြီးများသုံး၍ပင် မိုးပြိုသလို ရေကြဲချနိုင်ပြီ။ သို့သော် လူသားတို့စွမ်းအားဖြင့်အနိုင်ယူနိုင်ချည်းတည်း။
သစ်ပင်တို့အားပြန်စိုက်နိုင်ပါသည်။ မကြာမှီလများကအိန္ဒိယ၌ သစ်ပင်ပေါင်း သန်း၂၂၀။ အီသီယိုးပီးယားမှ အပင်သန်းပေါင်း ၃၅၀စိုက်ခဲ့ကြသည်။
မုတ်သုန်မိုးကောင်းသော မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့နိုင်ငံတွင် သစ်ပင်သန်းထောင်ချီစိုက်နိုင်ပါသည်။ မိုး(ရေ)ကိုသုံးလျှက် မီးကိုအနိုင်ယူနိုင်သည်။
ကမ္ဘာ့မြို့ပြတို့၌ သာမန်အိမ်မီး။စက်ရုံမီးကို ရပ်ကွက်ပြုတ်မကူးစက်အောင်တန့်နိုင်တားနိုင်သည်။
မီးသိပ္ပံ Fire science တွင် MS, Ph.D. အဆင့်ထိထားကာပညာသင်ကြားပေးနေနိုင်ပါပြီ။ သုံးတတ်လျှင်ဆေး မသုံးတတ်လျှင်ဘေးကြီးကားမဟုတ်တော့။
ထုံးတမ်းအရမှု ကမ္ဘာဦးကထဲက မဟာသမ္မတမင်းအဖြစ် ရှိလာသည်ဆိုကြ၏။
ရှေးပဝေဏသီကမူ မင်း ဟူသည်နှင့် သက်ဦးဆံပိုင်။ လူထုအားသေဆိုသေရှင်ဆိုရှင် စေနိုင်သူများသာဖြစ်သည်။ ထိုမှ ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုကို လူ့ယဉ်ကျေးမှုရေစီးကြောင်းအတိုင်း ပြင်ယူလာကြရကား မင်း၏အာဏာတို့ကျလာသည်။ လူအများရွေးကောက်တင်မြှောက်ကာ အုပ်ချုပ်ခိုင်းသူတို့တက်လာသည်။ အစိုးရဟူ၍အုပ်ချုပ်လာသည်။ လူထုက မဲစနစ်နှင့်တင်မြှောက်ရသဖြင့် သက်တမ်းလည်းရှိလာသည်။ သို့နှင့်လူထုရေချိန်အလိုက်မင်း အစိုးရတို့လိုက်ပြောင်းလာသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်ပင် လူထုတင်မြှောက်ထားသော အစိုးရအုပ်ချုပ်နေနိုင်ပြီမဟုတ်လော။
ယခုဆယ်စုနှစ်တို့တွင် ကမ္ဘာရာသီအပြောင်းကြမ်းကြီးကြောင့် လူသားတို့ရပ်တည်မှုတို့ခက်ခဲသည့်နိုင်ငံများမှ စစ်ပွဲနှင့်မတည်မငြိမ်မှုများဂယက်ဖြင့် မဟာရွေ့ပြောင်းမှုကြီးများဖြစ်လာရသည်။ ထိုရွေ့ပြောင်းမှုကြီးများနောက်ဝယ် တိုးတက်ပြီးနိုင်ငံတို့၏အဆင့်သင့်ခိုင်မာပြီးသော စနစ်နိုင်ငံတို့ အလုံးအရင်းအခြေချလာကြရကာ မူလလူတို့မှ ဆိုင်ရာတို့၏အကျိုးစီးပွားကာကွယ်လိုလာကြလို၍ ထိုထိုလူမျိုးရေးထူးကြည့်သူ အစိုးရတို့ကို ရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့ကြပါသည်။
သမိုင်းတပါတ်လည်တတ်သလို အာဏာပါဝါတိုင်းလည်း လှိုင်းသဘောလို အတက်အကျရှိသည်။ တက်ပြီးနောက်ကျ ကျပြီးနောက်တက်သဘောတည်း။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အမျိုးသားရေးများအရှိန်တက်လာပြီးထိပ်ရောက်ပြီး၍ အဆင်းလမ်းရောက်ကျချိန်ပြုပြီ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးတွင်လည်း အမျိုးသားရေး/လူမျိုးရေးအစွန်းနင်းမှုများ ကျလာတော့မည်တွက်ဆနိုင်ပါသည်။ ဤခေတ်မင်း၏အာဏာမှာ လူအများစုမဲပေးသူလူထုအလိုတော်အတိုင်းသာတည်း။
လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ သုံးပါးလုံးကို ခိုးခြင်းအမှုက ခြုံငုံသည်ဖြစ်၍ ခိုးခြင်း/ခိုးသူကို ရန်သူသတ်မှတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုခေတ်တွင် ခိုးသူတို့ ဆိုင်ဘာနှင့်ပုံရိပ်ယောင်လောက၌လည်းကျင်လည်အောင်မြင်နေသည်။
လူမသိသူမသိ လာဘ်စားသည်များ/အခွန်ရှောင်များလည်းရှိရာ Panama Papers(April 3, 2016)မှ လှစ်ဟပြဆိုချက်တွင်ပင် ကမ္ဘာအနှံ့ဘဏ်အမှုဘဏ်အမှု၂သိန်းကျော်သည်?
အင်တာနက်တွင်လည်း Deep Web, Dark Web ဖြင့် မြေအောက်လောကတို့ရှိလာသည်။ ထိုထိုတို့တွင် မူးယစ်ဆေး။ ဘဏ်စာရင်းမှသည် လူသတ်သမားအထိငှား၍ရသည်။
ဆိုင်ဘာလောကတွင် ဘီလီယံချီသော ထွင်းဖေါက်ခိုးယူမှုများ ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်များလုယူရောင်းစားခံရမှုများ ဖြစ်နေပါသည်။ EQUIFAX၏သုံးစွဲသူကိုယ်ရေးအချက်အလက်အသေးစိတ်တို့ ခိုးယူခံရခြင်း(Sept 2017)သည်ပင် အမေရိကပြည်တခုထဲ၌ လူပေါင်း၁၄၃သန်းတည်း။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဒေတာများခိုးယူယုံမက ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်များပြန်ပေးစွဲကာ ငွေညှစ်ခြိမ်းခြောက်မှုများလည်းဖြစ်လာသည်။ အစိုးရများပင် Ransomware၏ဒဏ်ခံကြရသည်။
မည်သို့ဆိုစေ၊ ခိုးသူသည် လူသားထုရန်သူတော်အဖြစ်ကားမကျရောက်နိုင်တော့ပါလေ၊ ဥပဒေလက်တံသည် ဒိပ်ဝဘ်/အင်တာနက်အထိလည်းလိုက်သည်။ နိုင်ငံတကာရဲများကလည်းဆက်စပ်ကာ ထိမ်းကြောင်းဖမ်းဆီးနိုင်လေသည်။ အင်တာနက်ဖန်ဆင်းရှင် အမေရိက၏ဥပဒေထိမ်းကြောင်းအဖွဲ့အစည်း/‌အေဂျင်စီတို့တွင် ခိုးသူတို့ထက်အမြဲသာသော လူအင်အား/ပညာအတွေ့အကြုံနှင့် Toolsတို့သည်ရှိ၏။
ပုဂ္ဂလိက ဆိုင်ရာသာဖြစ်၍မမျှတသော အဖြစ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ တဦးချင်းအတွက်တည်မှီပြောင်းနေနိုင်သည်ဖြစ်၍ မိမိ၏စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်သည်သာ ရန်သူဆိုရပေမည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတို့တွင် ဘာသာ‌ရေးမှလွန်၍ ဆိုင်ရာစိတ်ညစ်များကို ဖြေလျော့ပေးနိုင်သော Counsellor, Therapist များစုံရှိကြသည်။ ငွေပေး၍ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
စိတ်ရောဂါဆရာဝန်လည်း အဆင်သင့်ရှိပါ၏။ စိတ်နှင့်ပါတ်သက်သောဆေးဝါးအစုံလည်းထွင်စပ်ဖေါ်ထုတ်ထားကြပြီ။ သင်၏စိတ်ညစ်နွမ်းနေမှုများကို ကုသနိုင်ပါပြီ
ရှေးနှစ်၆၆သန်းက ၆မိုင်အလျားရှိဥက္ကာပျံဝင်ဆောင့်ခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာပျက်မတတ်ဖြစ်ကာ သတ္တဝါအများစုတို့မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နှစ်၁၆၅သန်းကျော်ရျင်သန်နေထိုင်နေသည့် ဒိုင်နိုဆောတို့လည်း လုံးဝမျိုးပြုတ်ခဲ့သည်။ (လူသားမျိုး(Homo sapiens)၏ ဤကမ္ဘာမြေတွင် သက်ရှင်နေထိုင်နိုင်မှု နှစ်၂သိန်းနှင့်ချိန်ဆကြည့်ပါ)
စကြ၀ဌာမှလာသောသဘာဝဘေးတည်း။ ယခုထိလူ့စွမ်းအားဖြင့်ချေဖျက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော ကမ္ဘာ့ရန်သူတော်တည်း။ လစဉ်လိုလို ဥက္ကာပျံကြီးများ ကမ္ဘာမြေနားမှကပ်ပွတ်သီဖြတ်သွားနေပါသည်။ အချိန်မရွေးကျရောက်လာနိုင်သည့် အခြေအနေပါ။ ဥက္ကာပျံတစင်းသည် လူသားတမျိုးလုံး ချက်ချင်းမျိုးဖြုတ်နိုင်သည်လော?
A.I. Artificial Intelligence ဉာဏ်တုစက်ရုပ်
စိတ်ကူးယဉ်ဇတ်တို့ တကယ်ဖြစ်လာနေပေရာ နာမည်ကြီးအများစုမှာ AI ဖြစ်သည်။
လူကိုကျော်၍ နတ်သို့စွမ်းမည်သေချာသလောက်ရှိနေသည်။ နောင်ဆယ်စုနှစ် ၂၀၃၀ရောက်လျှင် လူတို့၏အလုပ်အကိုင် သန်း၂၀။(ကမ္ဘာအလုပ်အကိုင်၏၈.၅%) ကို AI တို့သုတ်ယူသွားမည် ဆိုပါသည်။ ၂၀၃၅တွင် ကမ္ဘာအလုပ်အကိုင်၏ ၄၀% ဟုလည်းဆိုထားသည်။
လူသည်အလုပ်အကိုင်မရှိလျှင် ၀င်ငွေမရှိ။ ၀င်ငွေမရှိလျှင် ရပ်တည်မရဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ငွေရှိသူများအတွက်မှာမူ အေအိုင်အစွမ်းနှင့် လစာပေးရန်မလိုရကား အဆများစွာတိုး၍ချမ်းသာဖွယ်ရာသာရှိသည်။ လူတန်းစားကွားခြားမှုအစွန်းရောက်သွားကာ သာမာန်လူတန်းစားနှင့် အထက်တန်းလွှာတို့ မိုးနှင့်မြေ ဆိုင်ရာနိုင်ငံ/ဒေသများပင်ခွဲ၍ ကွဲ၍ နေထိုင်ကြရမည့်အခြေရောက်သွားနိုင်ပါမည်။ အေအိုင်သည် လူ့ရန်သူပါလော?
ပြီးခဲ့သောရာစုနှစ်များက အနောက်နိုင်ငံတို့စက်မှုခေတ်ပြောင်းသည်ဟူ၍ ရေ‌နွေးငွေ့(Industry 1.0)လျှပ်စစ်။အင်ဂျင် (Industry 2.0)တို့တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် IC, Chip,ကွန်ပြူတာ(Industry 3.0)ဆိုပါစို့။ ထူးခြားသည်မှာ စွမ်းအင်အဖြစ်အသုံးပြုလိုက်ကြသော မြေအောက်မှရုပ်ကျွင်းလောင်စာ ရေနံများသာပါ။ နှစ်ရာချီမီးရှို့ရင်း အင်ဂျင်တို့လည်ပါတ်စေခဲ့သည်မှ လူသား၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းတို့ တိုးတက်လာပါ၏။ ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်ခဲ့ပါ၏။ Quality of Life မြင့်ခဲ့ပါ၏။ နှစ်၂၀၀ကျော်ကြာပြီး ပြန်ကြည့်လိုက်သောအခါ ကမ္ဘာကြီးမှာ မီးခိုးတွေဝေလျှက်ရှိနေပေသည်။ ဆေးမှီသည်လောမမှီသည်လောမသိ။ လူတို့စွမ်းအားဖြင့် နောက်ကြောင်းပြန်နိုင်သော အချိန်၁၀နှစ်မျှကျန်သေးသည်လည်းဆိုကြသည်။ ဖြစ်လာသောသဘာဝဘေးများကိုလည်း အံတုနိုင်သးသည်။ သို့ဆိုသော် လူတို့ထုတ်သော မီးခိုး/ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ဓာတ်အညစ်အကြေးများသည် လူ့ရန်သူလော?
ဤကမ္ဘာမြေဝယ် မတူကွဲပြား/ခွဲခြားသည့်ဘာသာရေးကြောင့် စစ်ပွဲကြီးများဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ခရူးဆိတ်။ ဂျီဟတ်တို့သည် ဘာသာရေးစစ်ပွဲခေါ်သံများသာပါ။ လူ့သမိုင်းတလျှောက်ဘာသာရေးဟူသည် သိမ်မွေ့လွန်းစွာ လူ့လောကနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကို တိုးတက်စေခဲ့ပါသည်။ သို့သော် အစွန်းရောက်လက်ထဲတွင်ကား လူသေစေ၏။ သိန်းချီမက သန်းချီမျှသေစေပါသည်။ မမြင်မသိဖူးသူလူအချင်းချင်း အမုန်းပွားရွံမုန်းကြက ရန်လိုသုတ်သင်စေနိုင်ပါသည်။
လူသားတို့၏ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားတို့မှ မျိုးတူ/မတူလူသားအသက်မည်မျှဇိဝိန်ချုပ်စေခဲ့သနည်း။ အကြီးဆုံးစစ်ပွဲကြီးများသည် ဘာသာရေးမှလွတ်ကင်းပါ၏လော? အစွန်းရောက် နိုင်ငံရေး/ဘာသာရေးသည် လူသားရန်သူပါလော?
ဤမြေကမ္ဘာသည် Hostis humani generis ကို ပင်လယ်ဓားမြ/ကျွန်စနစ် ဟူ၍သတမတ်တည်းမထား ခေတ်နှင့်ညှိပြောင်းဖြုတ်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာတို့အတွက်မူ ရန်သူမျိုးငါးပါး နှစ်လည်းထောင်ချီနေပါပြီ။
မြန်မာ့နည်းမြန်မာဟန် ခေတ်မမှီသော ရန်သူမျိုးငါးပါးကို မြန်မာတို့ပြင်သင့်ပြီ။ ရေ/မီးတို့ကို တက္ကသိုလ်ပညာရပ်အားဖြင့်သင်ကြားလေ့လာ၍ စေခိုင်းအနိုင်ယူကြပါ။ “မင်း”ကိုကမ္ဘာ့အသံနားထောင်ညှိကာ မဲပေးပါ။ဖြုတ်ချပါ။ခန့်အပ်ပါ။ “ခိုးသူ”ကို ဉပဒေစိုးမိုးသောအားဖြင့် အနိုင်ယူပါ။ “မချစ်မနှစ်သက်သောသူ” သည်သင့်ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ သင်မချစ်လျှင် ဟိုကလည်းမုန်းပါမည်။ ချစ်ကြပါ။
ဤသူကမူ ဥက္ကာပျံ၊အေအိုင်၊နွေးကမ္ဘာနှင့်အစွန်းရောက်ကိုသာ ရန်သူမျိုး၎ပါးအဖြစ်အဆိုတင်သွင်းလိုက်ပါကြောင်း။